कुनै समयका चर्चित नेपाली हिरो पैसाको अभावमा मृत्युको मुखमा पुग्दै ! डायपर लाएर खाटमै थलिए (भिडियो हेर्नुस) – Etajakhabar
काठमाडौं (शिशिर भण्डारी) कलाकारलाई देशको गहना भनिन्छ, यो उपमा सुन्दा आनन्द आउंछ, एउटा कलाकारले गर्व गर्छ । जोश, जाँगर र शरीरमा तागत रहुन्जेल कलाकारितामा मरिमेट्छ । तर जब रोग लाग्छ अथवा बुढेशकालले छुन्छ, नेपालका कति कलाकारहरुले उपचार खर्च बिनै छटपटाउंदै यो धर्ती छोड्नुपर्छ । पछिल्लो समय यसको उदाहरण बने, बरिष्ठ कलाकार बि.एस राणा । अनि आज, बरिष्ठ कलाकार जयनन्द चन्द । जयनन्द चन्द ठकुरी यि बरिष्ठ कलाकारलाई पक्कै पनि तपाईले धेरै चलचित्रहरुमा देख्नु भएकै होला । १०० हाराहारी चलचित्र, दर्जनौं शिरियल र म्युजिक भिडियो संगै बिज्ञापनहरुमा अभिनय गर्नुभएका चन्द सुगर र प्रेसरका कारण थलिएर यतिबेला काठमाडौंको एकान्त कुनामा छोरी र श्रीमतीको साथमा बस्नुहुन्छ ।
नियमित चेकअप गराउनुपर्छ, औषधी खानुपर्छ तर चन्द परिवारसंग उक्त सामथ्र्य छैन । सन्तानको रुपमा एक छोरी मात्र हुन्, चन्दका । छोरीले नै आमा, बुवा स्याहारिरहेकी छिन् । ज्वाईको जागिरबाट आएको पैसाले उपचार खर्च बेहोरिरहंदा चन्दलाई गाह्रो छ । जयनन्द चन्द बोल्न सक्नुहुन्न । केहि समय अगाडिसम्म वाकरको सहायताले हिड्नुहुने चन्दका पाईलाहरु अब सर्न छाडिसके । स्वस्थ रहुन्जेल कलाकारितामा समर्पित चन्दे भागी भागी नजाऊ चलचित्रपछि कुनै पनि चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छैन । यद्यपी उहांलाई स्वस्थ भएर अझै फिल्म खेल्न मन छ ।
एउटा कलाकार पैसाको अभावमा उपचार बिना छटपटाईरहनु भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी त्यहां पुगेका थियौं । चन्दको उपचारमा थोरै भएपनि सहयोग होस भनेर पेप्सी कोलाबाट सर्वदा पण्डितले पठाउनु भएको १० हजार र हाम्रो तर्फबाट ५ हजार गरी १५ हजार सहयोग रकम चन्दलाई बुझायौं । आफुले सानैदेखि पर्दामा देखेको कलाकारको यो अवस्था देख्दा मेरो मन साह्रै रोईरहेको थियो । आफु पनि एक कलाकार भएका कारण कलाकारकै पिडा झनै मुटुभित्र गढ्दै थियो अनि मनमनै भन्दै थिए -कतै हाम्रो बुढेशकाल पनि यस्तै अभावमा बित्ने त होईन् ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १२, २०७६ समय: ९:०७:३६